Liverpool oo dejisay qiimaha ay Mane kaga iibinayso Bayern Munich – Gool FM
Liverpool oo dejisay qiimaha ay Mane kaga iibinayso Bayern Munich
Dajiye June 9, 2022
(Liverpool) 09 Juun 2022. Kooxda reer England ee Liverpool ayaa go’aamisay qiimaha ay ku iibinayso xiddigeeda reer Senegal ee Sadio Mane inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich ayaa raacdo weyn ugu jirta sida ay ku heli lahayd saxiixaha xiddiga reer Senegal iyo kooxda Liverpool ee Sadio Mane.
Wargeyska Mirror ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Liverpool ay jeclaan lahayd inay hesho lacag dhan 26 million pounds oo u dhiganta 30 million euros, marka lagu darro lacag gaareeysa 21 million euros oo isugu jirto lacagaha kala wareejinta iyo waxqabadkiisa qaar.
Tani waxay la macno tahay in kooxda reer England ay dooneyso in qiimaha guud ee heshiiska uu gaaro 51 million euros, lacagtaas oo la filayo in kooxda Bavaria aysan ogolaan doonin maadaama da’ada ciyaaryahanka ay sii koreyso, iyadoo hal sano ay uga harsan tahay qandaraaska uu kula jiro Liverpool.
Mane ayaa go’aansaday inuu qaato boorsadiisa oo uu ka tago kooxda reer England, inta lagu jiro suuqan kala iibsiga xagaaga, isaga oo diiday fikradda ah inuu heshiis cusub u saxiixo maamulka Reds, maadaama qandaraaskiisa haatan uu ku egyahay dhammaadka bisha June 2023.
Liverpool waxaa u furan inay iibiso Sadio Mane kahor inta uusan dhammaan qandaraaskiisa, halkii ay bilaash ku waayi laheyd adeega ciyaaryahanka dhamaadka xilli ciyaareedka soo aadan, iyadoo la ogyahay in maamulka Reds ay u sheegeen ciyaaryahanka inaysan hor istaagi doonin inuu ka tago Anfield.
RASMI: Alexandre Lacazette oo ku laabtay kooxda Lyon
Manchester United oo dalabkeedii ugu horeyay ka gudbisay Frenkie de Jong